RN 4 : 4×4 sy minibus taksiborosy nifandona, olona ampolony naratra | NewsMada
RN 4 : 4×4 sy minibus taksiborosy nifandona, olona ampolony naratra
Noho ny fandehanana mafy hatrany! Fiara 4×4 iray ana ambasady eto an-dRenivohitra nandona fiara Mazda taksiborosy mampitohy an’i Mahajanga, omaly atoandro tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra teo amin’ny PK 224, tsy lavitra an’Antanimbary.
Nanitsy teo amin’ny sisiny havanana amin’ilay taksiborosy mihitsy ilay fiara 4×4 io. Avy aty Antananarivo ho any Antsiranana ilay 4×4 io. Mafy dia mafy ny fifandonana satria niforitra ny lohan’ilay 4×4 ary rovitra ny ilan’ilay Mazda. Vokatr’izany, ampolony naratra tamin’ity loza ity, ary nisy ny tena voa mafy tao amin’ireo fiara roa. Olona dimy naratra tao amin’ilay Mazda, ary ny ambiny tao amin’ilay fiara 4×4. Nalefa any amin’ny hopitaly avy hatrany ireo naratra ireo nanaraka fitsaboana. Hatramin’ny ora nanoratanay, tsy mbola nisy ny namoy ny ainy, na nisy aza ny tena voa mafy.
Vokatr’ity loza ity, nitohana tanteraka teo amin’ity PK 224 ity. Tsy nisokatra ny lalana raha tsy ora maro taty aoriana. Ireo kamiao no tena tsy afaka mihitsy noho ny fahateren’ny arabe.
Vao ny faran’ny herinandro teo, nisy taksiborosy niharan-doza ihany koa tany amin’ny RN4, ka nahafatesana olona iray. Fiara Sprinter ity niharan-doza ity, izay nivadibadika tanaty hantsana rehefa niala lalana teo amin’ny fiolankolahana an’Ankazobe.
Mimenomenona ny olona
Amin’ny ankapobeny, fandehanana mafy sy tsy fahatomombanana eo amin’ny fiara ny mahatonga ny loza tahaka izao. Maro ny olona mimenomenona amin’ny tambajotra ara-tsosialy sy amin’ny radio amin’ny loza ateraky ny fiara fitaterana. Anisan’ny mampitaraina ny olona ny taksiborosy Sprinter. “Matanjaka ny fiara, tsy voafehin’ny mpamily kanefa mandeha mafy izy ireo, mbola ampian’ny entana misavovona entiny”, hoy ny tenin’ny olona. Maro ny manome tsiny ny mpamily, ny fampiasana ireny fiara ireny atao fitaterana olona.
Tamin’ny andron’ny Tetezamita, nanao ezaka ny zandary amin’ny famerana ny haavon’ny entana entin’ny taksiborosy. Tsy naharitra ela anefa izany fepetra izany fa nangingina ho azy teny ny raharaha, ary amin’izao, tsy nisy intsony izay fepetra raisiny amin’ny fanaraha-maso ny haavon’ny entana izay. Andraikitra tsara averina ho an’ny zandary ny fepetra raisiny amin’ny mpamily sy ny fiara entiny, mba hampihena ny lozam-pifamoivoizana.